महाभारतबाट कम परिचित प्रेम कथाहरू - PAMPEREDPEOPLENY.COM - योग-आध्यात्मिकता
महाभारतबाट कम परिचित प्रेम कथाहरू
घर योग आध्यात्मिकता उपाख्यान विश्वास रहस्यवाद oi-Renu द्वारा इशी सेप्टेम्बर १,, २०१। मा
महाभारत हिन्दू धर्ममा सब भन्दा ठूलो महाकाव्य र एक पवित्र पुस्तक हो। यो एक पूर्ण मार्गनिर्देशनको रूपमा कार्य गर्दछ, जीवनको सबै क्षेत्रहरुमा सम्बन्धित सबै प्रकारका स्थितिको लागि। यस पटक, हामी तपाईं को लागी संसारको सबैभन्दा ठूलो महाकाव्य बाट केहि प्रेम कथाहरु लाई ल्याएका छौं। राधा र कृष्णको कथा कसैको लागि नयाँ छैन। वास्तवमा तिनीहरूको सबैभन्दा सुन्दर र प्रेमको शुद्ध रूप हो जुन पृथ्वीमा कहिल्यै अस्तित्वमा छैन। यो एक ईश्वरीय प्रेम थियो, दुई आत्माको र दुई शरीरको सम्बन्ध। यी सबै सर्वोच्च क्रमको प्रेमको कारणले गर्दा, आज जोडीलाई दर्शाउँदा राधाको नाम कृष्णको अगाडि आयो।
के हामी रातमा केरा खान सक्दछौं?
रुक्मणिको कृष्णसँग पनि भएको विवाहको कथा कुनै नयाँ कुरा होइन। रुक्मणि कृष्णसँग विवाह गर्न चाहन्थे। जुन दिन उनका बुबाले अरू राजासँग जबरजस्ती विवाह गरिरहनुभएको थियो, उनले कृष्णलाई प्रार्थना गरिन् र बिहे गर्न अनुरोध गरे। उनीहरू भागे र विवाह गरे। यद्यपि त्यहाँ केहि अन्य कथाहरू छन्, जुन केवल थोरै मानिसहरूले मात्र जान्दछन्। एकचोटी हेर्नु।
अर्जुन र सुभद्रा प्रेम कथा
अर्जुन र गाडा दुबै गुरु द्रोणाचार्यको आश्रममा विद्यार्थी थिए। उनीहरू साथीहरू भएको कारण उनीहरू प्रायः एक अर्काको घरमा आउँथे। जब अर्जुन एक पटक गाडाको घर आएका थिए, उनलाई सुभद्राको दरबारमा लगियो। सुभद्रा र अर्जुनले एक अर्कालाई देखेपछि उनीहरू प्रेममा परे।
पछि अर्जुन र सुभद्राको बिहे भयो। तर अर्जुनको विवाह पहिलेदेखि नै द्रोपदीसँग भएको थियो। जब उनले सुभद्रालाई उनको घरमा लगे, उनले सुरुमा द्रोपदीलाई उनी अर्जुनकी पत्नी थिइन भनेर भनेन। दुबै राम्रा साथी बनिसके पछि मात्र उनले यो कुरा प्रकट गरिन्।
Paraषि पराशर र सत्यवती प्रेम कथा
पराशर एक प्रसिद्ध ageषि थिए, जसले अथक अभ्यास र गहिरो तपार्इ द्वारा ईश्वरीय शक्ति प्राप्त गरेका थिए। सत्यवती एक माछा मार्ने छोरी थिइन्, जसको नाम दशराज थियो। एक दिन ishषि पराशर उनको डु board्गामा चढे। सत्यवतीको सुन्दरता देखेर उनी उनीसँग माया गर्न लागे।
जब उनले उनीहरुसामु आफ्ना भावनाहरु व्यक्त गरे, उनले conditionsषि पराशर समक्ष तीन अवस्था प्रस्तुत गर्‍यो, ती हुन्: १. यौन संभोगको समयमा कसैले पनि उनीहरुलाई देख्नु हुँदैन, २. उनको कुमारीत्व प्रभावित नहुनु पर्छ र the. माछाको गन्ध उसले परिवर्तन गर्नुपर्दछ। एक सुगन्ध मा। पराशरले ती सबै सर्तहरू स्वीकार गरे। उनले उनीहरूको वरिपरि ईश्वरीय आवरण बनाए, बच्चाको जन्म भएपछि उनको कुमारीत्व पुनर्स्थापित हुनेछ र उनको गन्धलाई सुखदायक सुगन्धमा परिवर्तन गरियो, जुन टाढाबाट पहिचान गर्न सकिन्छ भन्ने कुराको यकिन गर्नुभयो। सत्यवतीले वेदव्यासलाई जन्म दिए।
सत्यवती र शान्तनु प्रेम कथा
उनको सुगन्धका कारण धेरै टाढा यात्रा गर्न सक्थ्यो, शान्तानू उनीतर्फ आकर्षित भए। सुगन्ध पाएपछि उनले सत्यवती डु boat्गामा बसिरहेको भेट्टाए। उनले उसलाई नदीको अर्को किनारमा राख्न लगाए। जब उनीहरू बैंकमा पुगे, उनले उसलाई फिर्ता लैजान भने। यो बेलुका सम्म जारी रह्यो। अन्तमा शान्तनुले उनीसँग बिहे गर्ने चाहना व्यक्त गरे। उनी पनि यस्तै भावनाहरू थिए तर उनको बुबाको चाहना थियो जुन उनी पूरा गर्न नसक्ने हुन सक्ने बताइन्। यस्तो विश्वास छ कि शान्तनुले सबै सर्तहरू पूरा गरे र सत्यवतीसँग विवाह गरे।
अर्जुन र उलूपी प्रेम कथा
उलुपी नागा राजकुमारी थिइन्। अर्जुनको लागि पसेपछि उनले उनलाई समातिन्। उनले त्यस बेला 'ब्रह्मचर्य' को अभ्यास पनि गरिरहेका थिए जसको अर्थ उनी महिलाहरुबाट टाढा बस्नुपर्‍यो। यद्यपि, उलुपीले उनलाई उनका चाहनाहरू पूरा गर्न सहमत तुल्याइन। पछि उनले उनलाई पानीमा कसैले आक्रमण गर्न नसक्ने वरदान पनि दिइन्।
हिडिम्बा र भीमा प्रेम कथा
हिडिम्बा एक नरभंश थियो र भीमा कुन्तीका छोरा थिए। हिडिम्बा भीमको प्रेममा परिणत भयो। उनीहरू विवाह गरे र केही समयको लागि सँगै बसे। यद्यपि, भीमले उनलाई पछि त्यागे। उनले घटोत्कछलाई जन्म दिइन्, र उहाँलाई एक्लै हुर्काइन्।
कसरी चिकन सलामी स्यान्डविच बनाउन
बंगलोर केटाहरू ब bang्गलोरबाट मान्छे देखिन्छन्
वजन घटाउन को लागी Chia बीज पिउन उत्तम समय
घरमा एलोवेरा फेस प्याक
कसरी गाढा ओठ प्राकृतिक रूपमा हटाउने